ASUS က K53SD များအတွက်ယာဉ်မောင်း DOWNLOAD - မောင်းသူ - 2019
Laptop ကို ASUS ကအဘို့အ drivers တွေကို Download K53SD
တခါတရံမှာဖြစ်ကောင်းရုံသိချင်စိတ်သို့မဟုတ်၎င်း၏အမှားပံ့ပိုးပေးလျှော့ချ၏သံသယထဲကအင်တာနက်အမြန်နှုန်းကိုအတည်ပြုရန်လိုအပ်ရှိသေး၏။ ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စရပ်များတွင်အဘို့, တစ်အများကြီးလိုအပ်နေသောအခွင့်အလမ်းကိုကမ်းလှမ်းကြောင်းအများကြီးကွဲပြားခြားနားသောဝက်ဘ်ဆိုက်များရှိပါတယ်။
ဒါဟာချက်ချင်းဖိုင်တွေနဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်များဆံ့သောသူအပေါင်းတို့သည်ဆာဗာများ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ကြပြီးကအထူးသဖြင့်အချိန်အနည်းဆုံးဆာဗာပေါ်တွင်စွမ်းရည်များနှင့်ဝန်အပေါ်မူတည်ကြောင်းသတိပြုသင့်ပါတယ်။ တိုင်းတာ parameters တွေကိုပြောင်းလဲနှင့်အထွေထွေအတွက်သင်တို့နှင့်အတူအတက်ကိုအဆုံးသတ်တိကျမှုမဟုတျပါဘူး, နှင့်အနီးစပ်ဆုံးပျမ်းမျှအားမြန်နှုန်းနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါတိုင်းတာခြင်းနှစ်ခုညွှန်းကိန်းအဘို့အထွက်ယူသွားတတ်၏ - download, အမြန်နှုန်းသည်နှင့်, ဆန့်ကျင်ပေါ်, ဆာဗာမှအသုံးပြုသူရဲ့ကွန်ပျူတာကနေဖိုင်တွေဒေါင်းလုပ်၏အမြန်နှုန်း။ ဒီ download စာမျက်နှာကိုသို့မဟုတ်သင်မည်သည့်အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုကိုကွန်ပျူတာထဲကနေဖိုင်တစ်ဖိုင် upload တင်ကြသောအခါဒုတိယအသုံးပြုသည်နေချိန်မှာတစ် web browser ကိုအတူ file - ပထမ option ကိုများသောအားဖြင့်ရှင်းပါတယ်။ ကျနော်တို့ကိုပိုပြီးအသေးစိတ်အတွက်အင်တာနက်အမြန်နှုန်းကိုတိုင်းတာဘို့အမျိုးမျိုးသော options များစဉ်းစားပါ။
Method ကို 1: Lumpics.ru အဘို့စမ်းသပ်
သငျသညျကြှနျုပျတို့၏ website ပေါ်တွင်အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။
လာမယ့်စာမျက်နှာတွင်, ခေါင်းစဉ်ကို click လုပ်ပါ « GO »စမ်းသပ်မှုစတင်ပါရန်။
ဝန်ဆောင်မှုအကောင်းဆုံးဆာဗာကိုအမြင်အာရုံဟာအမြန်နှုန်းပြကိရိယာကိုပြသ, သင့်ရဲ့အမြန်နှုန်းကိုဆုံးဖြတ်ရန်လိမ့်မယ် select လုပ်ပြီးပါလိမ့်မယ်, ပြီးတော့ကိန်းဂဏန်းများကိုငါပေးမည်။
Method ကို 2: Yandeks.Internetometr
အဆိုပါကုမ္ပဏီ Yandex လည်းအင်တာနက်မြန်နှုန်းစစ်ဆေးရန်၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုရှိပါတယ်။
လာမယ့်စာမျက်နှာတွင် button ကို click "တိုင်း"စမ်းသပ်မှုစတင်ပါရန်။
မြန်နှုန်းများအပြင်၌, ဝန်ဆောင်မှုကိုလည်းတစ်ဦးက IP လိပ်စာ, ဘရောက်ဇာကို, screen resolution ကို, သင်၏တည်နေရာနှင့် ပတ်သက်. နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Method ကို 3: Speedtest.net
ဒီဝန်ဆောင်မှုမူရင်း interface ကိုရှိပါတယ်, နှင့်မြန်နှုန်းများအတွက်စစ်ဆေးနေအပြင်လည်းအပိုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်ပေးစွမ်းသည်။
ဝန်ဆောင်မှု Speedtest.net ကိုသွားပါ
လာမယ့်စာမျက်နှာတွင် button ကို click "Start ကိုစကင်"စမ်းသပ်မှုစတင်ပါရန်။
မြန်နှုန်းများအပြင်, သင်သင်၏ ISP ၏အမည်, အိုင်ပီလိပ်စာနှင့် host name ကိုမြင်ရပါလိမ့်မည်။
Method ကို 4: 2ip.ru
2ip.ru service ကကွန်နက်ရှင်မြန်နှုန်း check လုပ်ပေးပါတယ်နှင့်အမည်ဝှက်ကိုအတည်ပြုရန်နောက်ထပ် features တွေရှိပါတယ်။
လာမယ့်စာမျက်နှာတွင် button ကို click "စာမေးပွဲ"စမ်းသပ်မှုစတင်ပါရန်။
2ip.ru ကိုလည်းသင့် IP နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်ပေး site ကိုမှအကွာအဝေးဖော်ပြပေးနှင့်အခြား features တွေအတွက်ရှေ့မှောက်တွင်ရှိပါတယ်။
Method ကို 5: Speed.yoip.ru
ဤ site ရလဒ်များပေးပို့လိုက်, အင်တာနက်ရဲ့အမြန်နှုန်းကိုတိုင်းတာနိုင်ပါသည်။ သူလည်းစမ်းသပ်များ၏တိကျမှန်ကန်မှုကို check လုပ်ပေးပါတယ်။
လာမယ့်စာမျက်နှာတွင် button ကို click "Start ကိုစမ်းသပ်ခြင်း"စမ်းသပ်မှုစတင်ပါရန်။
မြန်နှုန်းတိုင်းနှောင့်နှေးမှာကြောင့်ခြုံငုံမှုနှုန်းကိုထိခိုက်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ Speed.yoip.ru ခြားနားချက်များစစ်ဆေးခြင်း၏ထိုအချိန်ကခဲ့ကြသည်ဖြစ်စေ, အကောင့်ထိုကဲ့သို့သောမသိမသာကွဲပြားသို့ယူနှငျ့သငျအားအသိပေးပါ။
Method ကို 6: Myconnect.ru
အမြန်နှုန်း Myconnect.ru site ကိုတိုင်းတာခြင်းများအပြင်သူတို့ရဲ့ပံ့ပိုးပေး ပတ်သက်. အသုံးပြုသူတုံ့ပြန်ချက်ပေးထားပါတယ်။
မြန်နှုန်းစွမ်းဆောင်ရည်အပြင်, သငျသညျပံ့ပိုးပေးရဲ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုကြည့်ပါနဲ့သူတို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းခိုင်းနှိုင်းဥပမာနိုင်ပါတယ် - "Rostelecom", အခြားသူများနှင့်လည်းအခွန်ကိုကမ်းလှမ်းန်ဆောင်မှုကိုတွေ့မြင်ရန်။
ပြန်လည်သုံးသပ်၏အဆုံးမှာအဲဒါကိုမျိုးစုံန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုနိုင်ခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင်ကသင်၏အင်တာနက်မြန်နှုန်းခေါ်ခြင်းဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မည်ဟုပျမ်းမျှရလဒ်၏ညွှန်းကိန်းများအပေါ် အခြေခံ. သူတို့ကိုဖော်ပြရန်နှစ်လိုဖွယ်ကြောင်းကိုမှတ်သားရပါမည်။ အတိအကျကိန်းဂဏန်းတစ်ခုသာသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဆာဗာ၏အမှု၌သတ်မှတ်ပေမယ့်တူညီတဲ့ server ပေါ်တွင်အဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောဆိုဒ်များနှင့်အဆုံးစွန်သောလည်းအချို့သောအချိန်ကအလုပ်နှင့်အတူတင်ဆောင်နိုင်ပါတယ်နိုင်ပါသည်ကအနီးစပ်ဆုံးမြန်နှုန်းဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ပိုကောင်းတဲ့နားလည်မှု, သင်ဥပမာတစ်ခုပေးနိုငျသညျ - သြစတြေးလျမှာရှိတဲ့ဆာဗာထိုကဲ့သို့သောရုစ်အဖြစ်, အနီးအနားတစ်နေရာတွင်တည်ရှိသည်ဆာဗာထက်နိမ့်မြန်နှုန်းကိုပြသလိမ့်မည်။ သငျသညျရုစ်အတွက် site တစ်ခုနှင့်တည်ရှိသည်သောဆာဗာကိုသွားလျှင်, ပိသို့မဟုတ်နည်းပညာပိုင်းသြစတြေးလျထက်အားနည်းနေပါတယ်ဒါပေမယ့်သူကသြစတြေးလျထက်နှေးကွေးနေတဲ့မြန်နှုန်းထုတ်ပေးလိမ့်မည်။